Shockproof Ileba maka Mbadamba ụrọ Factory | China Shockproof Ileba maka Mbadamba Manufacturers, Suppliers
Anti-ọdịda Shockproof ikpe maka Samsung galaxy tab A7 Lite 8.7 2021 na ubu eriri
Ndakọrịta Akpanyere aha maka ikpe naanị na Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7 inch 2021Model: SM-T220 / T225) B fitGH fit dabara maka Samsung Tab A7 10.4 inch 2020 release (Model: SM-T500 / T505) tablet. ma ọ bụ mbadamba ihe nlereanya ọ bụla. Biko lelee nọmba nlereanya na ọnọdụ igwefoto tupu ịzụta. Hapụ aka gị na ihe eji eme ubu, ọ bụ ihe pụrụ iche maka ụmụaka na-eje ije / na-eme njem, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ndị ọrụ ụlọ, ndị ọrụ na-ewu ụlọ yana ndị na-arụ ọrụ n'èzí.
Shockproof Ileba na Clear Piel Back N'ihi iPad Air 4 10.9 inch 2020 Hapụ
Ezubere nke emere maka iPad Ikuku nke anọ nke 10.9 Inch 2020 (Nọmba Nlereanya: A2072 / A2316 / A2324 / A2325). Dakọtara na ngwaọrụ ndị ọzọ. Tinye anwụrụ akpụkpọ anụ PU na-adịgide adịgide, na adụ TPU dị nro na akuku akwara na kristal doro anya. Acryli Ike shei azụ mkpuchi na-agbanwe TPU bompa na-echebe iPad gị site na mkpịsị aka mkpịsị aka, ịtụnanya, ndapụta na mberede na mmetụta Soft microfiber dị n'ime ime ihu na-egbochi mbadamba nkume gị ịchacha. Na mkpuchi mkpuchi doro anya ga-eji nganga gosipụta ...
Ihe ntụgharị dị arọ nke 360 ​​maka ipad maka Samsung maka mbadamba Lenovo
Ikike nchedo dị ike nwere okwu ahụ nwere okpukpu atọ nwere okpukpu atọ: akwara polycarbonate siri ike n'ime, shea silicone dị nro na etiti ihu, Ọ na-echedo ngwaọrụ gị site na ncha na nchikota na-enweghị agbakwunye nnukwu. 360 DEGREES ROTATABLE Kemeghi aka-eriri eriri eriri nwere ike dị mma maka ụmụ akwụkwọ, dọkịta, ndị nkuzi ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ chọrọ otu aka na ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ. Ma ọ bụ nwatakịrị ma ọ bụ okenye, ịnwere ike ịhazigharị eriri ahụ ka ndị ọrụ wee nwee obi ụtọ ...
Ebughibu Shockproof Juputara Ikpe n'ihi na ipad maka Samsung maka Lenovo mbadamba
Ọrụ nchedo zuru ezu Ikpe ahụ mejupụtara eriri dị nro dị nro nke dị n'ime iji kpuchido egwu na ọdịda, yana akwa PC dị larịị siri ike, nke siri ike maka nkwalite na nkọwa. Kpọmkwem cutout Nkịtị oghere ọnwụ na-enye ohere mfe ohere niile bọtịnụ, njikwa & ọdụ ụgbọ mmiri na-enweghị na-ewepụ ikpe. Oghere niile, ọdụ ụgbọ mmiri na bọtịnụ nwere ike ịnweta na-enweghị wepụ ikpe ahụ. NA KICKSTAND Site na nhazi ihe eji eme ka ị nwee ike ịkpọ oku vidiyo na-enweghị aka, gụọ, ma ọ bụ lelee ihe nkiri ebe ọ bụla ...